Hlola iMadagascar - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eMadagascar.
Okufanele ukwenze eMadagascar.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eMadagascar
Bukela ividiyo emayelana neMadagascar
Hlola iMadagascar izwe elihlala isiqhingi esikhulu esinegama elifanayo, esisolwandle i-Indian Ocean ogwini olusempumalanga ye-Afrika. Yisiqhingi sesine ngobukhulu emhlabeni.
Abantu bokuqala bafika eMadagascar phakathi kwe-350 BC ne-550 AD besuka eBorneo ngezikejana eziphuma ngaphandle. Abahlali bokuqala base-Austronesian bahlanganiswa ne-1000 AD ngabokufika bakwaBantu abawela isiteshi saseMozambiki.
Amanye amaqembu anjengama-Arabhu, amaNdiya, namaShayina aqhubeka nokuzinza eMadagascar ngokuhamba kwesikhathi, ngalinye lenikela ngokuphila okungapheli empilweni yamasiko aseMalagasy. Indlela yokucabanga yaseMalagasy ifaka ingxube yamasiko, kanye nokubukeka kwawo nesitayela semfashini. Kuyimbiza yokuncibilika. IMadagascar iyingxenye ye-African Union.
Ukuhlukaniswa isikhathi eside neMadagascar emazwenikazi angomakhelwane kuholele ekuxubeni okuhlukile kwezitshalo nezilwane, eziningi ezingatholakali kwenye indawo emhlabeni. Lokhu kuholele ekutheni ezinye izazi zemvelo zibize iMadagascar ngokuthi “izwekazi lesishiyagalombili”. Ezitshalweni ze-10,000 ezalelwa eMadagascar, ama-90% atholakala kwenye indawo emhlabeni. Izilwane nezimbali ezahlukahlukene zaseMadagascar zisengozini yemisebenzi yabantu, njengoba ingxenye yesithathu yemvelo yayo inyamalala kusukela kuma-1970s futhi selokhu kwafika abantu eminyakeni engu-2,000 edlule, iMadagascar ilahlekelwe ngaphezu kwe-90% yehlathi layo lasekuqaleni. Ama-lemurs amaningi abhalwe njengezinhlobo ezisengozini noma ezisengozini.
Uhlangothi olusempumalanga, noma oluya ngasemoyeni kulesi siqhingi luyikhaya lamahlathi emvula asezindaweni ezishisayo, kuyilapho izinhlangothi ezisentshonalanga nangaseningizimu, ezihlala emthunzini wemvula wezindawo eziphakeme maphakathi nendawo, ziyikhaya lamahlathi omile asezindaweni ezishisayo, amahlathi anameva, kanye nezindawo eziwugwadule nezindawo eziqhelile zase-xeric. Ihlathi lemvula elinamandla laseMadagascar ligcinwe ligcinwe lingcono impela kunamahlathi emvula asempumalanga noma ithafa eliphakeme eliphakathi nendawo, mhlawumbe ngenxa yobuningi babantu ababephansi ngokomlando.
Isimo sezulu siyashisa ogwini, kushubisa umnkantsha, futhi kuyomile eningizimu. IMadagascar inezinkathi ezimbili zonyaka: isikhathi esishisayo nesinezimvula kusuka ngoNovemba kuya ku-Ephreli, nesikhathi esibandayo, esomile kusuka ngoMeyi kuya ku-Okthoba.
Idolobha lase-Antananarivo Capital, lihlala libizwa ngokuthi “Tana” ngabantu bendawo.
I-Antsiranana Capital yedolobha laseDiana, enye yezindawo ezikleliswe kakhulu eMadagascar
U-Andoany (owaziwa nangokuthi i-Hell-Ville)
Ipaki Yesizwe SaseMasoala
I-Tsingy de Bemaraha Reserve
I-Andringitra National Park
Ihlathi lemvula iMontagne d'Ambre National Park
I-Ankarana ne-Ankarana National Park
ILemurs 'Park eningizimu-ntshonalanga ye-Antananarivo
Isikhumulo sezindiza sitholakala eduze kwedolobha lase-Ivato elinezithuthi ezishibhile zomphakathi eziya esikhungweni iTana.
Thola izithelo nezitsha zikaMalagasy. Ungakunambitha okusenkingeni ngezindleko ezincane: amakhrayoni, ubhanana, ama-apula wesinamoni, ama-sambos, amasoseji we-zebu, amawolintshi.
Ngemoto ukuphela kwendlela ebiza kakhulu yokuhambahamba, kepha imigwaqo yaseMadagascar icishe ibe yonke ebangeni eliphansi kakhulu (ngaphandle kwemizila ye-2 ehola iphuma eTana). Imigwaqo eminingi ihlanganiswe ngemigodi futhi ingama-quagmires ngenkathi yezimvula. Xwayiswa ngokuthi ukuhamba ngomgwaqo cishe kuzothatha isikhathi esithe xaxa kunalokho obekulindelekile. Ukuqashwa kwemoto eyi-4WD kunganciphisa le nkinga kepha izindleko zizobe ziphakeme kepha zibiza kakhulu. Ngenxa yesimo esingesihle semigwaqo izinkampani eziningi eziqasha izimoto zizokuqasha kuphela imoto uma usebenzisa omunye wabashayeli bazo. Ezimweni eziningi, umshayeli angaba umqondisi wakho nomhumushi.
IsiFulentshi siwulimi lwesibili olusemthethweni lwaseMadagascar. Uhulumeni nezinhlangano ezinkulu zisebenzisa isiFulentshi ebhizinisini lemihla ngemihla, kepha i-75-85% yeMalagasy kuphela inekhono elilinganiselwe kulolu limi. Imizamo yabantu bakwamanye amazwe yokufunda nokukhuluma isiMalagasy iyathandwa futhi ikhuthazwe ngabantu baseMalagasy.
Abasebenza izivakashi nezinye izikhulu zikahulumeni bazoba nomyalo ofanele wamaNgisi.
I-Tsingy de Bemaraha yindawo ye-UNESCO Yamagugu Womhlaba futhi iyindawo enkulu kunazo zonke eyiMadagascar (152,000 hectares). Ithafa eliphakeme lamatshe elimboze umhlobiso lihlotshiswe ngeqoqo lezintambo ezibuthakathaka, ezibabayo, ezibizwa ngokuthi “Tsingy”, ezibizwa nangokuthi iLabyrinth of Stone. Izindawo ezinamahlathi anqabile futhi zinikeza ithuba lokubona ama-lemurs ansundu kanye nokuphila kwezinyoni okuhlukahlukene, singase futhi sihlangane nesaka elivamile le-Decken emhlophe. Izinhlobo ezinhle zezitshalo zifaka: ama-aloyizi, ama-orchid, ama-pachypodium amaningi nama-baobab. Ihlathi elinqunyiwe liyikhaya lezinhlobo zezinyoni ezingaphezu kwe-50; Izinhlobo ze-7 zama-lemurs (kufaka phakathi i-All-white Deckens sifaka) ne-chameleon engabonakali eyisiqubu (i-Brookesia perarmata). Indawo yaseBemaraha iphethwe ngaphansi kwe-UNESCO ekhethekile futhi ukufinyelela kuyakhawulelwa futhi nezindawo ovunyelwe ukuzivakashela ziyahlukahluka ngezikhathi nezikhathi. Kutholwe cishe i-180 km enyakatho neMorondava.
I-Tsingy de Ankarana yinguqulo encane ye-Tsingy de Bemaraha. Le paki enyakatho isemgwaqweni wezwe oya e-Antisirana futhi ngaleyo ndlela itholakale kalula. Ipaki futhi iyikhaya lezinhlobo ezintathu zama-lemurs, ama-chameleon.
I-Avenue of the Baobabs yisimo esingejwayelekile esijwayelekile sezihlahla ezinkulu zebaobab. Kutholwe imizuzu engu-45 enyakatho neMorondava ogwini olusentshonalanga lwaseMadagascar kungenye yezindawo ezivakashelwe kakhulu eSifundeni saseMabeabe. Umuntu ozothatha izintambo njengomunye we-7 Wonders of Africa; Imizamo iyaqhubeka ukuvikela lesi sakhiwo esiyingqayizivele sezihlahla ezingaphezu kweshumi nambili. Ezinye zezihlahla, i-Adansonia grandidieri, zingaphezu kweminyaka engu-800 futhi zifinyelela kumamitha ayi-30 + amamitha. Ngempela isithombe sepharadesi futhi sihle kakhulu ekushoneni kwelanga
I-Kite ne-Windsurfing, i-Emerald Sea (Fly to Diego). Phakathi kuka-Ephreli noNovemba kukhona umoya we-30 ongaguquki wokwenza lokhu kungenye yezindawo ezinhle kakhulu zokushweza elwandle eningizimu hemisphere.
Kuqondiswe uKayaking, Ile Sainte Marie. Bona izwe likwehlukile. Hlola ugu olusogwini lweSainte Marie enhle nesiqondisi sendawo. Ngobusuku emahhotela ahlukahlukene endawo ubusuku ngabunye futhi uxhumana nabantu. Hlola amadolobhana futhi uphumule emigqonyeni ecashile. Amanzi acwebile futhi acwebile e-Crystal - akunasipiliyoni esidingekayo futhi umuntu akufanele abe-Ultra-fit.
Ukudoba Olwandle Olukhulu, Nosy Be. Suka emanzini amaningi aseNosy Be futhi uhambe, ngokunethezeka, uye eziqhingini zaseRadamas noma zaseMitsio. ISailfish, iKingfish, iKing Mackerel neWahoo bonke bakulindile. Amanzi asogwini olusentshonalanga eseningizimu nawo anokuhle ukudoba.
Ukuvakasha Kwezilwane zasendle. Izinhlobo zezitshalo nezilwane zaseMadagascar ziyingqayizivele (ngaphezu kwe-80% azikho kwenye indawo), ngakho-ke izivakashi akufanele zaphuthelwa ukubona amaLemurs, iTortoise, amaGeckos, amaChameleons nezimbali ezingajwayelekile. Imigwaqo ayinamizi, kepha ingqalasizinda encane yezwe yenza kube inselele kubahambi abazimele. Hlela ukuvakasha nenkampani enhle eyazi izwe kahle.
Kukhona ama-ATM ama-MCB noma i-BFV noma ama-BNI emadolobheni amaningi. Amakhadi we-Visa namakhadi we-Master ayemukelwa.
Abathengi bazothola okuningi abazokuthenga ezweni. Izinongo, ezinjenge-vanilla, ziyisikhumbuzo esikhulu nenani elikhulu.
Okuhlukile kukho konke lokhu ngukuhamba, okungabiza kakhulu kumuntu ozihambelayo. I-Air Madagascar ishaja izivakashi eziphindwe kabili kuwo wonke amathikithi. Ukuhamba komphakathi okulinganiselwe kusho ukuthi ukuphela kwendlela yetekisi-brousse (engahlelelwa ngokuqondile noma engatholakali ezindaweni eziningi) kuyimoto yangasese noma ukuqashwa kwesikebhe.
I-Voanjobory sy henak leka, isidlo sendabuko eMadagascar esenziwe ngeBambara landnut ephekwe ingulube
I-Ravimbomanga sy patsamena iqukethe amaqabunga amazambane adliwe nge-shrimp eyomile nenyama yenkomo edluliselwe ilayisi.
Indlela eshibhile yokuthola ukudla iwukudla “ngokushisayo” noma ezindaweni zemakethe. Ukudla okulula kufaka ipuleti yerayisi, i-laoka (i-malagasy yesitsha esiseceleni esihambisana nelayisi) njengenkukhu, ubhontshisi noma ingulube, namanzi elayisi. 'Yakha' isaladi elincane elivame ukufaka isaladi lamazambane neminye imifino. Okufanayo kuyatholakala nakwi-baguette. Isobho ezinhlotsheni ezahlukahlukene, imvamisa kufaka ne-pasta nazo zithandwa kakhulu.
Ubhanana (amakhulukhulu ezinhlobonhlobo) namaqebelengwane erayisi ('isinkwa' sikaMalagasy) ayinto eyingqayizivele 'ukudla komgwaqo' futhi kuyatholakala yonke indawo. Ikhofi inhle kakhulu, imvamisa eyenziwe ngesandla yindebe futhi inikezwe ubisi oluncibilikisiwe. I-Steak-frites iyatholakala ezindaweni zokudlela emadolobheni amakhulu.
Kunamaketanga amathathu amakhulu esitolo esikhulu eMadagascar. Shoprite, Score kanye nomholi Inani. wonke amaketanga wesitolo asezitolo amathathu aseNtshonalanga agcinwe kahle, kepha amanani abizayo abonisa isidingo sokungenisa cishe yonke into. Kunezimpahla eziningi ezifakwe uphawu zakwaShoprite noMholi kodwa futhi kunemikhiqizo ethile yasendaweni (i-veg, izinongo njll, eshibhile kakhulu kunanoma imiphi imakethe yasemgwaqweni). IShoprite ishibhile kancane futhi inezitolo e-Antananarivo, Mahajanga, Toamasina nase-Antsirabe. (UShoprite uyuchungechunge lwaseNingizimu Afrika oluphethwe nezitolo emazweni ase-15 ase-Afrika)
Ngenkathi lapho amanzi amaningi empompo ethathwa njengephephile, emadolobheni amaningi akuvamile ukuthi kube nezinkinga. Amanzi asemabhodleleni angatholakala cishe yonke indawo. Okufanayo ku-Fanta, Coca Cola,… Bonbon Anglais, kanye nobhiya obuhlukahlukene njenge-Three Horses Beer (THB), Castel, Queens, Skol,… Izindawo zivame ukuphuza i-rum ngoba ishibhile kakhulu kunobhiya. Amajusi wemvelo hhayi awemvelo nawo angatholakala kalula. Enye inketho i-ranon'apango (RAN-oo-na-PANG-oo) noma amanzi elayisi (amanzi asetshenziselwa ukupheka ilayisi, okuyobe sekubilisiwe) okuvame ukusetshenziswa lapho kudliwa ezindaweni zasendaweni. Kubaluleke kakhulu ukuhlela kusengaphambili uma uvakashela izindawo zasemakhaya. Kungakuhle uthathe amaphilisi we-chlorine, angasetshenziswa ukwenza amanzi endawo aphuzwe.
I-rum eyenziwe kabusha ekhaya, ne-creme de coco, iyatholakala futhi - ekunambithekeni okuningi!
Impilo yansuku zonke eMadagascar ilawulwa ngama-fady (taboos) amaningi ahlukahluka kusuka esifundeni esithile kuya kwesinye. Bangakwenqabela ukudla (ingulube, i-lemur, ufudu ...), ukugqoka izingubo zombala othile, ukugeza emfuleni noma echibini. Ukuqashelwa kwe- “fady” kuvame ukukhawulelwa ezindaweni zasemakhaya, ngoba izivakashi cishe ngeke zingene kule nkinga uma zihlala emadolobheni amakhulu. Kodwa-ke, kunezindlela ezisefashini ezindaweni ezifana ne-Antananarivo kodwa iningi leVazaha alikhishwa.
Ama-Fady kuthiwa abokhokho, amaMalagasy athola kuye inhlonipho noma ngabe iyiphi inkolo yawo. Kuphephile kakhulu ukuhlonipha lokhu kwenqatshelwa futhi ungazephuli, noma ngabe unomuzwa wokuthi akunangqondo. Yazisa ngemfashini yasendaweni lapho ufika endaweni entsha.
Lapho ukhuluma nanoma ngubani osemdala kunawe noma esesikhundleni seziphathimandla (isib. Amaphoyisa, ezempi, izikhulu zamasosha), sebenzisa igama elithi “tompoko (TOOMP-koo)” ngendlela efanayo oyisebenzisa ngayo u- “mnumzane” noma “ma'am” ngesiNgisi . Ukuhlonipha abadala nezibalo zegugu kubalulekile eMadagascar.
Ungalokothi uthathe izithombe zethuna ngaphandle kwemvume. Njalo cela imvume ngaphambi kokuthatha izithombe. Futhi, uma uya edolobhaneni elikude noma i-hamlet, kungukuthi fomba, noma isiko, ukuthi uqala ukuhlangana nenhloko yedolobhana uma unebhizinisi edolobhaneni.
I-Royal Hill yase-Ambohimanga